Taageerayaasha Kooxaha Man City Iyo Chelsea Oo UEFA Ka Dalbaday In Final-ka Champions League Laga Soo Wareejiyo Magaalada Istanbul. – Goolhaye
May 8, 2021 May 18, 2021 SiganeComment(0)
Taageerayaasha labada kooxood ee Chelsea iyo Manchester City ayaa ka dalbadey xiriirka kubada cagta yurub ee UEFA in final-ka Champions League-ga loo soo wareejiyo gudaha England ka dib markii Turkey lagu soo daray liiska wadamada halista COVI-19 ee boqortooyada UK.
Istanbul ayuu qorshuhu yahay in lagu ciyaaro Final-ka Champions League-ga 29-ka May balse Turkiga ayaa galay seddex isbuuc oo xirid buuxda ah todobaadkii hore, sidoo kale boqortooyada Ingiriiska ayaa wadanka gelisay heerka ugu sareeya ee xadidaada safarka.
Taas ayaa ka dhigan in qof walba, oo ay ku jiraan xitaa ciyaartoyda laftooda, ay tahay inuu galo 10 maalmood oo karantiil ah marka uu ku laabto gudaha UK taas oo dhibaato ku ah u diyaar garowga Koobka Qaramada Yurub ee xulka qaranka England.
Xoghayaha gaadiidka iyo duulista UK Grant Shapps ayaa xaqiijiyey in jimcihii dowlada iyo FA-ga ay wadahadalo la galeen Uefa si final-ka Champions League-ga bishaan loogu soo wareejiyo gudaha England.
Hadii UEFA go,aansato in final-ka Champions League-ga lagu ciyaaro gudaha England garoomada la rajeynayo in lagu ciyaaro waxaa ka mid ah garoonka xulka qaranka England ee Wembley Stadium, Villa Park oo ay leedahay kooxda Aston Villa iyo garoonka kooxda Totenham Hotspor Ee London Stadium.